काका र फुचुंग्री २०७१ पुस ३ गते | Saugat : Naya Yougbodh
काका र फुचुंग्री २०७१ पुस ३ गते
फुचुंग्री : सुन्नु भो काका ? हाम्री चेली पूजा बोहरालाई बलात्कारको अभियोग लागेकाहरुलाई पुनरावेदन अदालतले सफाइ दिएछ । अनि पूजाले आफ्नो पीडा पत्रिकाबाट पोखिछन् । अनि त कानून तथा न्यायमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्मले पूजालाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएछन् नि !
काका : अरुले त उनको न्यायका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु कर्तव्य नै हो । तर, बलात्कारजस्तो मुद्दामा बलात्कारीलाई सफाइ दिने पुनरावेदनका न्यायाधीशको फैसलामा पो शंका देखियो त फुच्ची । ती प्रतिबद्धता जनाउने तेरा अङ्कलहरुले ती न्यायाधीशहरुले कुनै अदृश्य चलखेलका आधारमा पो त्यस्तो निर्णय भएको हो कि ? छानविनमा ध्यान दिए हुन्थ्यो कि ?
फुचुंग्री : अनि हाम्रा एमाओवादीका अङ्कलहरु पनि सारै पदलोभी भए कि क्या हो काका ? फुटाउनेले पार्टी फुटाएरै पद पाए, बचेखुचेका पनि पदकै लागि भिडिरहेका छन् । यो त अचाक्ली भएन र ?
काका : हराउने रोग लाग्यो भने कमिलाको पनि प्वाँख उम्रिन्छ र फुच्ची ! तेरा एमाओवादी र माओवादीका अङ्कलहरुलाई पनि त्यस्तै भाको त होला नि । कि कसो ?
फुचुंग्री : अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी अङ्कलहरुले त खाजा र भत्ता मागेर आन्दोलन थालेछन् नि ? आन्दोलनको मौसम आएछ कि क्या हो ?
काका : त्यत्रा भेडाबाख्राको हुलजस्ता ६ सय १ जनाले सिन्कै नभाँची त्यत्रो वर्षसम्म ग्वाम्म ग्वाम्म खान हुने भएपछि बिचरा काम गर्नेहरुले त माग्ने नै भए नि ? तेरा सभासद् अङ्कलहरुले कामै नगरी त्यत्रो रकम हसुर्नुभन्दा त तिनै खाउन् भन्नेस् पो लाग्यो म बूढालाई त ।
फुचुंग्री : साँच्चै काका ? सबैले माघ ८ मा संविधान नआए अनर्थ हुन्छ भन्दैछन् । के साँच्चिकै अनर्थ होला त ?